Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone in Lugood iyo ka Lugood si iPhone
> Resource > Music > toogashada Dhibaato ku saabsan music kala iibsiga ka Lugood in iphone
Toogashooyin Dhibaato ku saabsan music kala iibsiga ka Lugood in iphone aan syncing
Ku dar Music inay iPhone ama iPod wirelessly
macruufka 8 ma nidaameed Music doono la Lugood
Wixii wareejinta Music ka Lugood in mobiilka iPhone ama aan habka syncing ku lug leedahay qaar ka mid ah talaabooyinka, kuwaas oo lagu sharxay sida hoos ku qoran:
• Connect iPhone si aad u computer
• Dooro iPhone oo isticmaalaya menu Device ee xulka ugu sareeya bidix ee shaashadda
• Riix doorasho oo kooban iyo Dooro Gacanta Maamul Music iyo Videos
• Markaas Riix Codso
Haddii la eego dhacdada, aad rabto in aad ku darto music inay iPhone ama ipod wirelessly, oo aan syncing wax walba oo ku lug leh qalabka la Lugood, oo dhan waxaad u baahan doontaa in ay soo jeedin ku Lugood Wi-Fi nidaameed. By default this wirelessly syncing ayaa lagu wadaa inuu off oo sidaas aad u baahan tahay noqon muujinta 'ON'. Geedi socodka heshiis hoos ku leh sida loo awood-socodka oo ka mid ah fullinta Wireless syncing u dhaxaysa macruufka & Lugood. Waa kuwan tallaabooyinku oo ay la socdaan snapshots ah:
• Isku taabashada iPhone, iPod, ama iPad in computer isticmaalaya cable USB ah. Talaabadani waxay u baahan tahay isticmaalka Cable oo hubaal ay tahay markii ugu keliya marka aad u baahan tahay si aad u isticmaasho in nidaamka oo dhan.
• Markaas Burcad Lugood dooro qalab macruufka ah, ka dibna hoos "Summary" screen hoos tagaan si aad u ogaato 'Options "sida ku cad shaashada ka
• Next aad u baahan tahay si aad u hubiso sanduuqa 'nidaameed la iPhone taliya Wi-Fi', tani waxay ka muuqan doontaa arrin kala duwan ee kiiska qalabka waa iPod ama iPad
• Hadda riix 'Mari' si ay awood syncing wireless qalabka in
Hadda socodka ah ee ku daray of music si ay iPhone ama iPod wirelessly weli, oo waxaa loo sameeyaa by talaabooyinka soo socda:
Tallaabada ugu sahlan habka marka aad dhinaceeda karti Lugood 11+ aad u baahan tahay in ay doortaan 'Show galeeysid' ka menu View ah.
• Markaas Dooro Media ku darto iyo jiididda iyo iyaga hoos u badan si ay u iPhone, iPad ama iPod xiriiri galeeysid ah
• Geedi socodka ah ee suuqa kala iibsiga ee songs bilaabmin. Ha kala iibsiga heeso. Syncing ka mid ah qalabka lagu ogaan karaa iyada oo ku icon fur yar in bar horyaalka macruufka ama icon fur in Lugood ah
Users badan ayaa soo food saartay dhibaato taas ay dhacdo in ay la casriyeeyay si macruufka 8. isticmaala waxa ay sheegay in sababta oo ah qaar ka mid ah sababaha aan la garanayn, music oo dhan waxaa si buuxda u tageen oo wax alla wixii dadaalka ay faa'iideysan, music weligood kuma uu wareejiyo. Si loo xaliyo arrintan, waxa jira tallaabooyin qaar ka mid ah, kuwaas oo ku xusan sida hoos ku qoran:
• bareesada ee iPhone ama iPad macruufka orodka 8 ama wax ka sareeya oo aan bilowno Lugood
• Dooro iPhone ka menu dropdown ah, taas oo u muuqata
• Markaas Dooro Music in navigation guddi kooxda
• Ka dibna, uncheck ee doorasho nidaameed Music dibna riix Codso ama nidaameed.
• Marka u hagaagsan yahay dhamaystiran, nusasaace ka sanduuqa nidaameed Music iyo guji mar kale codso ama nidaameed.
• Dami aad iPhone ama iPad iyo arko haddii aad music soo laabtay
In badan oo kiiska, dhibaato waa wada oo aad ku raaxaysan doonaa music sida ka hor.
Inta badan dadka isticmaala iyo Akhristeyaasheena, waxaa jira madal blog ah, kaas oo iman karo sida caawimo weyn u xaaladood oo kala duwan. Madal blog Tani waxay fasireysaa dhowr arrimood, oo hanuunin tallaabooyinka loogu tala galay toogashada dhibaato ka mid ah arrimaha kala duwan ee. Ama waxay noqon wareejinta ku jira ka phone jir cusub hal ama maaraynta telefoonada android iyo murriyado, madal this, waa waxtar leh baahiyaha kala duwan ee qaybaha baahsan ee isticmaala. Madal wondershare waa xal one stop qalabka oo dhan sida iPhone, iPad, iPod, android, iyo kuwo badan oo ah.
Wondershare, Taas oo dhab ahaantii hal caga lagu kalsoonaan karo baahida kala duwan, sidoo kale furfuraya, dhibaatooyinkii la xiriira suuqa kala iibsiga music ka iPhone in Lugood.
Bedelka music ka mid iPhone inay Library wax Lugood kombiyuuterada kala duwan;
Bedelka labada Lugood Store iibsaday iyo heeso aan iibsaday ka iPhone in Lugood,
Copy heesaha oo dhan iyo playlists ka iPhone in Lugood aan la abuuro nuqul;
Remain farshaxanka, ciyaarta soo oogay, qiimeynta, iwm inta lagu guda jiro wareejinta;
Taageerada iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5s, 5c, 4s, 4, 3GS socda ee macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9;
Download iyo rakibi TunesGo Wondershare on your computer. Versions Separate Windows iyo Mac labaduba waa la heli karaa. Wondershare TunesGo ka dhigayaa mid aad u fudud in aad heeso ka iPhone wareejiyo Lugood, si gaar ah, wax kasta oo song ka iPhone wax wareejiyo Library wax Lugood. By waxaa la isticmaalayo, waxa kale oo aad heli doontaa jawaabta sida ay u gudbiyaan music iibsaday ka iPhone in Lugood. Ogaaw in aad xor in ay isku dayaan!
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la your computer
Burcad TunesGo Wondershare. Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone iyo surin in cable USB ah in aad booska USB computer. Marka xiran si guul ah, aad iPhone lagu soo bandhigi doono suuqa kala muhiimsan ee Wondershare TunesGo la info ee aasaasiga ah ee aad iPhone soo bandhigay.
Tallaabada 3. Transfer Music ka iPhone in Lugood Library
On uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad riixi kartaa helitaanka deg deg ah "Si Lugood" in aad nuqulka heesaha oo dhan iyo playlists ka iPhone in aad Lugood Library. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, Wondershare TunesGo celin doonto heesaha iyo playlists hore u hartay aad Lugood Library, iska ilaalinta guud nuqul.
Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Media" dhanka bidix si ay u soo galaan suuqa kala Music ah. Laga soo bilaabo halkan, waxaad ka arki kartaa heesaha oo dhan aad iPhone. "Smart dhoofinta in Lugood" hawlaha sida "Si Lugood", taas oo music oo dhan ka iPhone in Lugood Library gudbin doona. Si ka iPhone in Lugood Library wareejiyo songs soo xulay, hubi heeso iyo guji saddexagalka rogay dureeri "Dhoofinta in" oo xulo "Dhoofinta in Lugood Library".